"Waalidkaygu Gaajo Ayay Ku Seexan Jireen, Aniga Iyo Walaalkayna...." - Romelu Lukaku Oo Ka Warramay Noloshii Adkayd Ee Uu Kusoo Koray - Gool24.Net
“Waalidkaygu Gaajo Ayay Ku Seexan Jireen, Aniga Iyo Walaalkayna….” – Romelu Lukaku Oo Ka Warramay Noloshii Adkayd Ee Uu Kusoo Koray
October 12, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Weeraryahanka xulka qaranka Belgium iyo kooxda Inter Milan ee Romelu Lukaku ayaa daboolka ka qaaday sidii ay qoyskiisu usoo rafaadeen xilligii uu da’da yaraa, markaas oo isaga iyo walaalkii oo kali ahi ay cashayn jireen halka waalidiintooduna ay gaajo ku seexan jireen.
Romelu Lukaku oo xili ciyaareedkii hore 34 gool u dhaliyey Inter Milan oo sidoo kale uu keenay finalka Europa League, isla markaana ay Juventus dhibic kaliya kaga qaadday horyaalka Serie A, ayaa waxa uu ka sheekeeyey noloshii adkayd ee qoyskiisu kusoo koreen iyo sida hadda xaaladdoodu isku beddeshay.
Laacibkan oo waraysi siinayay wargeyska La Gazzetta della Sport waxa uu sheegay in aabbihii uu u ahaa qofka tarbiyeeya ee tusaalaha ugu ah hab-dhaqanka wanaagsan ee nololeed, waxaanu yidhi: “Maalin walba wuxuu i bari jiray inaan si habboon ugu dhaqmo gudaha garoonka iyo noloshayda kaleba. Wuxuu i baray sida loo ixtiraamo qof kasta oo aad aragto, in la salaamo, in dadka la eego. Dhab ahaantii waa waxyaabo fudud laakiin aniga i caawiya maalin walba.”
Lukaku ayay xirfaddiisa ciyaareed kusoo baxday kooxda Anderlecht ee ka dhisan waddanka Belgium oo uu ku biiray May 13, 2009 markaas oo ay da’diisu noqotay 16 jir.
“Wuxuu hayay muuqaallo daawasho goolashiisii ah, waxaana ku jiray mid uu ka dhaliyey Anderlecht oo aan maskaxdayda ka bixin sababtoo ah wuxuu ka dhaliyey kooxda aan taageero Belgium. Waxa aan u xiise qabay inaan iyaga u ciyaaro waxaanay ii ahayd mid ka mid ah riyooyinkayga oo ii rumoobay.”
Romelu Lukaku waxa kale oo uu ka hadlay hooyadii iyo sidii ay ugu dagaallantay qoyskeeda xilligii noloshu ku adkayd, waxaanu yidhi: “Markii uu aabbahay joojiyey xirfaddiisa ciyaareed, waxaan ahaa lix jir, hooyadayna waxa laga daaweynayay macaan. Waxa aanu galnay sannado nolo adag ah. Hooyaday wax lacag ah may haynin waxaanay ka shaqaynaysay maqaaxi cunto, aniga iyo walaalkayna waanu raaci jirnay marka aanu ciyaarta soo dhamaysano.
“Waalidkaygu may cashayn jirin, waxaana kaliya (habeenkii) wax cuni jirnay aniga iyo walaalkay.”
Lukaku oo hadalkiisa sii wata, waxa uu sheegay in gool kasta oo uu dhaliyo uu dabbaal-degga ku xuso hooyadii, waxaanu yidhi: “Mar kasta oo aan dhaliyo, waxa aan sameeyaa tilmaan ah ‘A’ aniga oo xusaya hooyaday Adolphine, sababtoo ah, iyada la’aanteed maan ahaadeen qofka aan maanta ahay.”